बालुवाटारमा कोरोनाको प्रवेश, ओलीका ३ सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई कोरोना Bizshala -
बालुवाटारमा कोरोनाको प्रवेश, ओलीका ३ सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई कोरोना
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई पनि कोरोना पोजिटिभ भएको छ ।
रिमालले ट्वीट गरी हिजो पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिएको उल्लेख गर्दै आज त्यसको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताएका हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पनि आफूलाई कोरोना पोजिटिभ भएको बताएका थिए ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या शाहलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यसैगरी, ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
ओलीका किचन क्याबिनेटका सदस्यहरुलाई धमाधम कोरोना संक्रमण भएसँगै ओलीलाई पनि संक्रमणको जोखिम हुने संभवना प्रवल भएको छ । यो पटक ओलीको स्वाब परीक्षणका लागि लगिएको थिएन । उनको स्वाब संकलनको तयारी भइरहेको बालुवाटारस्थित स्रोतले जनाएको छ । यो पटक ओलीलाई समेत कोरोना संक्रमण हुने संभावना बढेको छ ।
दोश्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरी स्वास्थ्यलाभकै अवस्थामा रहेका ओलीलाई कोरोना संक्रमण भए अवस्था निकै गम्भीर हुनसक्ने भन्दै चिकित्सकहरुले उनलाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छन् । तर, ओलीले दिनहुँ भेट गर्ने रिमाल र भट्टराईलाई नै कोरोना पोजिटिभ भएपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समेत आतंक मच्चिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीपरिषद बिस्तार, को को भए नयाँ
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना गुटका ५ नेतालाई...
प्रधानमन्त्रीद्वारा देशवासीलाई आह्वान-‘भ्रममा नपरी
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको...
ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाण्डौ । नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले...
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा संसद विघटन !
काठमाण्डौ । आइतबारबाट सुरु भएको चरम राजनीतिक संकटको एउटा कारण...
७ मन्त्रीको राजीनामा, प्रचण्डको साथ छाडे बादल र लेखराजले
काठमाण्डौ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल९(प्रचण्ड) र...
ओलीले संसद विघटन गर्नुको रहस्य यस्तो पो रहेछ !
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहानै आकस्मिक...
यस्ता छन् संवैधानिक परिषदले गुपचुप सिफारिस गरेका नामहरु
काठमाण्डौ । संसद विघटन भएकै दिन संवैधानिक परिषदले रिक्त रहेका...
प्रचण्ड-नेपाल पक्षका मन्त्रीहरु सामूहिक राजीनामा दिंदै
काठमाण्डौ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र...